Ntuziaka Na-eduga Maka Icheta Okporo Tozọ Na Businessntanetị ...ntanetị Gị ... | Okporo ụzọ ka Mgbakwunye
Ntuziaka Na-eduzi Maka Icheta okporo ụzọ Gị Internet Business
Na-enweghị Mgbasa ozi gị ma ọ bụ Mmemme Mgbakwunye, a gaghị anabata ọrụ gị yana enweghị nkwenye, na okwu ndị ọzọ, ndị na-ege ntị azụmahịa gị anwụọla!
09/23/2021 02:55 elekere GMT
Ọtụtụ ndị mmadụ na-edebanye aha na Mgbakwunye Mgbakwunye nke ahụ bụ, Onye na-akwalite ihe, ma ọ bụ nke gị ma ọ bụ onye ọzọ na-atụ anya ịre ahịa ma ọ bụ ọrụ!
Maka ụdị Azụmaahịa a, ịkwesịrị ịkwalite, ndị na-ere ahịa Mgbakwunye yiri ya na ebe kachasị mma maka ndị ahụ bụ Mgbanwe Okporo ,zọ, Ndepụta Nchekwa, Ndị Na-ezigara Gwọọ Ihe, wdg.
Ọtụtụ ndị mmekọ na-ere ahịa n'otu aka ahụ na-anwa ikwere na mpụga igbe ahụ ma ụfọdụ ewepụtala nchoputa ha ma tinye ndepụta nke Usoro Mgbasa Ozi. Otu n'ime ndepụta dị bụ.
Ihe anyị na-egosi site na nke ahụ bụ ndị nwere ihe dị ka ụlọ ahịa, ebe nrụọrụ weebụ na-ama ụlọ ahịa dị ka ụlọ ọrụ Jeweler.
-eme ka a Weebụsaịtị nke ahụ bụ Onye ọrụ-enyi na enyi.
Ọ dị mma, yabụ na ịchọrọ ịdọta ndị ọbịa gị na eserese na usoro eserese na saịtị ahụ. Ọ bụghị naanị na ọ ga-ewe oge iji kwado ma ndị ududo ga-achọpụta n'otu aka ahụ ịchọgharị na weebụsaịtị. Ọ bụrụ n’idebanye n’otu n’ime ha wee bido n’ahịa ịzụ ahịa gị, ị ga-enwerịrị ike ibute ndị ahịa ọzọ ị nwere ike.
Targetchụ okporo ụzọ nwere ike na-esitụrụ gị ike ibido. Ọ bụrụ n’ịghọta ihe ị ga - eme na ebe ị ga - ebido, ọ nweghị okwu ga - adị ma ọlị. Buru ihe ndị a n'uche maka ịrụ ọrụ servicentanetị na-arụ ọrụ nke ọma!
Na-enweghị Mgbasa ozi gị ma ọ bụ Mmemme Mgbakwunye, a gaghị anabata ụlọ ọrụ gị na enweghị nkwenye, yabụ, ndị na-ege ntị azụmahịa gị anwụọla! Ọtụtụ ndị na-ere ahịa mgbakwunye na-anwa ikwere na mpụga igbe ma ụfọdụ ewepụtala nchoputa ha ma tinye ndepụta nke usoro mgbasa ozi. Ọ dị mma, yabụ na ịchọrọ ịdọta ndị ọbịa gị na eserese na usoro eserese na saịtị ahụ. Ọ bụrụ n’idebanye otu n’ime ha ma bido n’ọrụ mgbasa ozi gị, ị ga-enwerịrị ike ịkpọbata ndị ahịa ọzọ.
Targetchọta okporo ụzọ saịtị nwere ike ịbụ obere ọrụ na-esiri gị ike.